Hetsika eny amin’ny 13 mai : Nofaranana omaly ny tolona -
AccueilSongandinaHetsika eny amin’ny 13 mai : Nofaranana omaly ny tolona
24/05/2018 admintriatra Songandina 0
Omaly alarobia no andro nolazain’ireo depiote miisa 73 mpitarika etsy amin’ny kianjan’ny 13 Mai tamin’ireo mpomba azy fa namaranan’izy ireo ny tolona. Hita sy heno ihany koa io fanapahan-kevitra lehibe io tamin’ny alalan’ny haino aman-jery teto an-drenivohitra. Nanao izay ho afany araka izany, na ireo mpitarika izay nampihorohoro faramparany ireo mpikambana tao amin’ny HCC, na ireo mpomba azy tamin’ny fanapahana ny ampahan-dalana teto an-drenivohitra tamin’io andron’ny omaly io. Tapaka noho izany ny lalana teo Ambohidahy satria dia nosakanana tamin’ny fiara lehibe. Tranga izay nanahirana ireo mpampiasa ny lalana, saingy niafiana satria efa hetsika farany no nataon’ireo mpitolona omaly. Efa hita ihany koa fa mihavitsy ireo olona manara-dia ireto depiote ireto efa ho andro maromaro izao, ka izay no nahatonga azy ireo nanapa-kevitra fa hamarana ny tolona. Nahatsapa ihany koa ireto mpitarika eny an-kianja, fa ny hijery fampisehoana sisa no ahatongavan’ny ankamaroan’ny olona eny amin’ny 13 Mai fa tsy misy miditra amin’ny sain’izy ireny izay kabary politika sy rediredy ataon’ireo mpandaha-teny. Ny fiainana rahateo efa sarotra, ka zara aza misy fampisehoana maimaimpoana hanesorana izay vesatry ny fiainana andavanandro izay.
Andrasana araka izany izay ho fanajan’ireto depiote ireto ny fanapahan-kevitra noraisin’izy ireo. Azo tarafina amin’izay mantsy izay ho fitantanan’izy ireo ny firenena raha toa ka hanao kobaka am-bava fotsiny na tena ho tompon’andraikitra tamin’izay teny nomena. Raha ny tokony ho izy mantsy taorian’ny omaly dia hanentana ireo mpomba azy tsy hiverina etsy amin’ny kianjan’ny 13 Mai ireto depiote ireto. Manova toe-tsaina anefa ny fitiavan-tseza tafahoatra, ka asa na hahavita izany na mbola hisisika amin’ny fanimbana ny firenena tampoka indray ireto depiote ireto. Tokony ho nitovy tamin’ny fiangaviana nataon’i Lanto Rakotomanga tamin’ny mpomba azy ho tonga maro omaly, no hiangaviany azy ireo hijanona ao an-tranony indray.